Antibacterial drugs muzvirwere zvemagynecology
Runako uye utano Kukurukurirana kwevakadzi
Pakati pezvirwere zvemadzimai ekuberekwa, nzvimbo dzinotungamirira dzinoshandiswa nekuvhiringidza zvirongwa. Izvi zvinowanzobatanidzwa nezvinhu zvakawanda: kushungurudzika nguva dzose, kusava nekudya kwakashata, hupombwe hwehupombwe, hupenyu husina hukama hwehupenyu uye, semugumisiro, hutachiona hwakawanda hunopesana nehutachiona hwehutachiwana hunoita basa ravo.
Nokudaro, basa remishonga inorwisa mabhakitiriya mune gynecology haigoni kuve yakarongedzwa.
Kurapa maantibhakitiriya mune gynecology
Antibacterial therapy in gynecology inoshandiswa zvinobudirira mukurapwa kwezvirwere zvinoputika zvechibereko uye zvinyorwa, vagin, pelvic peritoneum. Mishonga inorwisa mabhakitiriya inorayirwa nekuchenjerera, kunyanya inotarisa pathogen uye kunzwisisika kwayo kune ichi kana icho chikamu. Mukuwedzera, munyaya imwe neimwe yakatarwa, muyero, nguva yehutungamiri, uye kusangana nemimwe mishonga inoshandiswa inosarudzwa. Zvose izvi ndezvifananidzi zvinofanira kufungwa nezvachiremba anoenda.
Kusvika iye zvino, mishonga yemishonga inopa mishonga yakasiyana-siyana yemishonga inorwisa mabhakitiriya, iyo inopesana nemitengo yemitengo, mukubudirira kune marudzi akasiyana eabhakitiriya, uyewo nenzira yekusunungurwa.
Kunyatsotarisa muhutano hwezvirwere kunopiwa kune antibacterial maitiro emunharaunda, nemazita akasiyana-siyana anowanikwa mune chimiro:
vaginal suppositories .
Mishonga yeAntibacterial inowanzoshandiswa mumatambudziko akaoma, vane maitiro ehutachiona hwemagetsi, anobvisa zviratidzo zvekuvhiringidza, uye anokwanisawo kushandisa. Nguva yekubhabhatidzwa inopesana zvichienderana nehutano hwechirwere. Uyewo, mazano ekugadzirira mapurogiramu anoshandiswa kudzivirira mushure mokuuya kwekuvhiya. Antibacterial suppositories ane mazita akadaro sePozinzinaks, Klion-D, Pimafucin, Terzhinan, nezvimwewo, vakazviratidza pachavo mumutambo wevakadzi.
Progesterone - injections nekunonoka
Smear for purity
Cranberry juice ne cystitis
Mastectomy - chii ichocho?
Kwete mwedzi mushure mokubvisa pamuviri
Kurapa kwechirwere cervicitis
Adenomyosis - kurapwa nemishonga yevanhu
Hormonal disorders muvakadzi
Algodismenorea - chii ichocho?
Kukanganiswa kwepamuviri nemishonga yevanhu
Brown kubudiswa kubva kumudzimai
Kupfuura kushandiswa kweprush?
Nzira yekudyisa mwana achangoberekwa sei?
Embassy yeEcuador muRussia
Kuvhiringidza zvepabonde muHollywood: Harvey Weinstein akapomerwa nezvekunetswa
Nzvimbo dzepamusoro dzepamusoro dzebvudzi dzine mabheji
Nyuchi dzemabhiza dzinonzwika zvikuru mubhururuka - maziso
Chii chinowanzo kupisa mumakati?
Koliflower - inobatsira zvinhu
Chokwadi chinofadza pamusoro peGreat Britain
Kuchengetedzwa kwevagandanga kuchikoro
Ndezvipi zviri nani kutsvaira matata - mangwanani kana manheru?
Mwana anowanzotambura nehutonho - chii chaunofanira kuita?
Pancreatitis muimbwa - zviratidzo
Nzira yekutora sarub syrup?
Nzira yekusarudza sei bhakiti yekicheni?
Italian folk costume
Ringworm pamusoro pechiso
Kanye West Blonde Kanye West akaonekwa muhurumende mushure mekurapwa
Zvakanaka sei kuudza murume wangu nezvekuita pamuviri?
Nzira yekupfeka sei kubvunzurudzwa?